Nudism na Asia na osimiri ya, na-achọ nnwere onwe? | Akụkọ Njem
Searchchọ nnwere onwe? Nudism na Asia
Maria José Roldan | | Philippines, India, Tailandia, Asia njem
Enwere ọtụtụ ndị na - agba nzọ na ịgba ọtọ, ma n'ụlọ ma mgbe ha na - eme njem. Ha na-ahọrọ ịnụ ụtọ oge ezumike ha n'ụzọ ha chere na ha nwere onwe ha n'ezie, na ọ dịghị ihe na-eke ha agbụ ma ọ bụ na m ga-egbochi ha. Ndị mmadụ nweela ọtụtụ ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze guzobere kwa ụbọchị nke mere na n'oge ezumike anyị ga-egbochi ọchịchọ ịgba ọtọ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe anyị chọrọ ime, nri?
Ma ị gaghị aga ebe ọ bụla ma gba ọtọ ọtọ iji soro ndị ọzọ na-eme ihe nkiri. O nwere ndị ọzọ ekweghị ha kwenyere na ụdị ndụ a Ha kwesiri ikwanyere ha ugwu, dika ha kwesiri ikwanyere gi ugwu ma oburu na i kpebie ime nudism n’ebe edobere ya.
Mana gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Eshia? N'ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịchọ nnwere onwe iji nwee ike ịnụ ụtọ nudism ma nwekwaa obi ụtọ na ala ndị ahụ na ọha mmadụ ha na ihe niile ọ ga-enye gị? Echefula ihe zuru ezu n'ihi na taa achọrọ m ịgwa gị gbasara nnwere onwe ị nwere ike ịchọta ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nnukwu mpaghara Eshia.
1 Enwere osimiri ịgba ọtọ na Eshia?
2 E nwere ụfọdụ ebe na-eme ele mmadụ anya n'ihu
2.3 Fọdụ ụsọ mmiri dị n’ụsọ oké osimiri nke India
Enwere osimiri ịgba ọtọ na Eshia?
Ọ dị m nwute ịbụ onye kwesịrị ịgwa gị na n'eziokwu, ọ nweghị ụsọ mmiri n'akụkụ Eshia niile ebe ị nwere ike ịchọta osimiri ndị zuru oke na ịgba ọtọ.. Oha obodo Asia nwere omenaala omenala Dịkwa ka ụkpụrụ ha si dị, ịgba ọtọ abụghị omume a na-asọ oyi ma ọ bụ ọbụna na-atụle.
Mana nke a bụ tiori, n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ezie na n'ozuzu ya, nke a bụ echiche kachasị, eziokwu bụ na ụfọdụ ndị bi na Eshia chọta nudism omume nnwere onwe nke na-enyere ha aka ijikọta na ime ha nakwa na okike.
E nwere ụfọdụ ebe na-eme ele mmadụ anya n'ihu
N'ihi nke a, na mpaghara Asia buru ibu ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ebe ndị njem nleta si n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa (yana ndị Asia nwere echiche enweghị mmacha) nwere ike ime ịkwa iko na-enweghị oke esemokwu na enweghị nsogbu iwu ma ọ bụ ndị nwe obodo. ...
Enwere opekata mpe mba 5 ma ọ bụ 6 ebe a ga-eme nudism n'atụghị ụjọ na nsonaazụ ọjọọ na iwu. Iji maa atụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga Thailand enwere osisi ebe a na-anakwere ọtọ ọtọ ma ọ nweghị onye ga-ele gị anya n'anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ nnwere onwe ahụ ọbụlagodi obere.
Osimiri m na-ekwu maka ya dị na agwaetiti Koh Pha Ngan. Mana ị ga-akpachara anya ma hụ na ebe ị nwere ike ịme nudism, n'ihi na nudism zuru oke bụ ihe iwu na Thailand ma ọ bụrụ na ị na-eme ya, ha nwere ike ịkwụsị gị. Ọ bụrụ n’ịga Thailand, ị kwesịrị ịkwanyere iwu ugwu dị ka obodo ọ bụla ọzọ iji zere nsogbu na-enweghị isi.
Enwere ọtụtụ ndị na-ekwu na a ga-eme nudism na Philippines na-enweghị nnukwu mmetụta. Ọ bụ ezie na ịnweghị ike ịme nudism ebe ọ bụla ịchọrọ n'ihi na ọ bụ iwu na-akwadoghị ma enwere ike ijide gị, ọ dị ka ọ dị ebe na Philippines ebe ị nwere ike ịme nudism n'atụghị ụjọ ma ọ bụrụ na ị na-emebi iwu ma ọ bụ na ị gaghị. Ọ dị n'ógbè Palawan ebe agwaetiti a na-akpọ Boayan dị. N'agwaetiti a ị nwere ike ịga ebe obibi ebe gị na onye òtù ọlụlụ gị nwere ike ịgbazite ebe ma si otú a nwee ike ịnụ ụtọ sọsọsọ osimiri nwere ike ịme nudism.
Na nke a ịgbazite ị ga-enwe nhọrọ ịme ihe ọ bụla ịchọrọ n'ụsọ osimiri dị ka ije ije ọtọ ọtọ n'enweghị onye ọ bụla nsogbu. N'ezie, ị ga-enwerịrị nkwanye ùgwù na ndị ọzọ na-ekpori ndụ na mgbazinye ha n'ụsọ osimiri a. Ọ bụ ike nke ego, agbanyeghị na anaghị anabata nudism, ma ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ... ị nwere ike ime ya na ebe a kpaara ókè. Mana echela banyere ime ya na mpụga ebe enyere gị ohere, n'ihi na mgbe ahụ ị nwere ike inwe nsogbu.
Fọdụ ụsọ mmiri dị n’ụsọ oké osimiri nke India
Mana ọ bụrụ na ihe m gwara gị ruo ugbu a dị gị obere na ịchọrọ ịmatakwu ntakịrị, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịma na n'ụsọ oke osimiri nke India ị nwekwara ike ịme nudism ma ọ bụ ịkọwa ọtọ. Ha bụ obere ebe nchekwa ma nwee ike ịnabata ndị na-eme ya.
Osimiri ndị a m na-agwa gị nwere akụkọ ihe mere eme na oge gara aga na ọ bụ ya mere ha ga-eji anabata omume a, ikekwe ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme adịghị amasị na ha agaghị anabata omume ndị a. Ma nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ n'ime osimiri ndị a nwere ya na obere ndá »‹ mgbanwe na ihe kará »‹ rá »‹ rá »‹ Ha nwere nnukwu mmetụta hippie nke mere na ndị India na-asọpụrụ akụkọ ntolite. N'ihi nke a, a na-akwanyere ụfọdụ omenala ochie ugwu ọ bụrụhaala na ọ bụghị ihe nzuzu, okwu rụrụ arụ ma ọ bụ nke nwere ike imebi nsọpụrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga India na njem ma ọ bụ ezumike ma ị nwere mmasị ịnụ ụtọ ụdị osimiri ndị a, egbula oge ịga osimiri dị ka Ozra Beach ma ọ bụ Vagator Beach, ha abụọ nọ na Goa. N'ime mpaghara a niile, ọ ga-abụrịrị ụsọ osimiri ndị kacha emeghe maka ịgba ọtọ na mpaghara a.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga Israel, ịmara na a naghị anabata nudism mana ọ bụrụ n’ịga ụsọ osimiri Tel Baruch (nke dị n’ebe ugwu Tel Aviv), Eingedi ma ọ bụ Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ ị nwere ike ịchọta ebe ịsa ahụ hers nwere ike itinye uwe dị iche iche na otu.
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na mgbe ha nyere gị ohere ịme ọtọ ọtọ, ọ pụtara na ị nweghị ike igosi ahụ gị niile gba ọtọ, ya bụ, ọ bụghị ịkwa iko. Nọmalị ha ga-eme ka ị kpuchie akụkụ ahụ nwoke na isi ya na uwe eji egwu mmiri nke mere na ịgba ọtọ ga-egosi akụkụ ahụ dị elu. Ikwesiri ighota na ha di iche iche nke ị nwere ike ịnwe mgbe ịchọrọ ịmụrụ ọtọ, mana ekwesịrị ịkwanyere ya ugwu dịka ịchọrọ ịkwanyere ugwu n'ụlọ, ị gaghị asọpụrụ nkwanye ùgwù!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Searchchọ nnwere onwe? Nudism na Asia
Atụmatụ njem 10 maka ụbọchị nne
Atọ nke London dị egwu na akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ihe mere eme